Telegram ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်က iOS မှထွက်ပြီး Android သို့ပြောင်းရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်? | Androidsis
La Android နှင့် Appl အကြားစစ်ပွဲe သတင်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီ။ နှစ် ဂေဟစနစ်နှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာပြီးသူတို့ရဲ့အားသာချက်များနဲ့အားနည်းချက်တွေရှိခဲ့တယ်။ Telegram ကိုတည်ထောင်သူနှင့်တည်ထောင်သူပါဗယ်ဒိုရော့ဗ်၏အဆိုအရ iPhone အသုံးပြုသူများအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်သည်မှာ Android သို့ပြောင်းခြင်းဖြစ်သည်။
အကြောင်းရင်း? ကိုက်သောပန်းသီးနှင့်အတူကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များ၏အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်သိသိသာသာကန့်သတ်သော။ အမှန်တရားကတော့အကြောင်းပြချက်မရှိပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဟာအက်ပလီကေးရှင်းအက်ပလီကေးရှင်းပြင်ပမှာအက်ပလီကေးရှင်းတွေကိုတပ်ဆင်လို့မရဘူး။ Android မှာလွယ်လွယ်ကူကူပဲ။
PávelDúrovရှင်းရှင်းလင်းလင်း - iPhone ကိုမေ့သွားပြီး Android အတွက်လောင်းပါ
သင် jailbreak လုပ်နိုင်သည်မှာမှန်သော်လည်း iPhone ၏အခွင့်အလမ်းများကိုတိုးမြှင့်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးသည့်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးစက်ကိုမည်သို့ပြန်လည်တည်ဆောက်ရမည်ကိုမသိပါကအာမခံဆုံးရှုံးမှုကဲ့သို့သောအမှန်တကယ်ခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ …။ အဲဒီအစား, Android တွင်သင်သည်အမျိုးမျိုးသော application များကို APK format ဖြင့်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ဟာ Google Play Store ကိုမှီခိုအားထားစရာမလိုသောကြောင့်၊ Telegram ၏စီအီးအို၏အဆိုအရ၎င်းသည်ထူးခြားသောခြားနားချက်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ပေးသည့်အလွန်ကြီးမားသောအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
«ဒါ့ကြောင့်သုံးစွဲသူများကို iOS မှ Android သို့ကူးပြောင်းရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်သတင်းအချက်အလက်လွတ်လပ်စွာစီးဆင်းမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်၎င်းတို့ပြုလုပ်နိုင်သည့်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်Donald Trump ၏နောက်လိုက်များကကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသော Parler အက်ပလီကေးရှင်းကိုမကြာသေးမီကဖယ်ရှားခဲ့ပြီးနောက်ရုရှား developer သည် Telegram တွင်သူ၏ဘလော့ဂ်တွင်ရေးသားခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် APK ကိုအမြဲတမ်းဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး Android မှာဒီ app ကိုဆက်ပြီးသုံးနိုင်ပါတယ်။
ဒူရိုဖော်ပြသည့်အတိုင်း«ဟုတ်ပါတယ်၊ အက်ပဲလ် - ဂူဂဲလ်ရဲ့လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုကတွစ်တာထက်လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်ပြmuchနာပိုကြီးလာစေတယ်။ သင်နှစ်ခုစလုံးအတွက်အန္တရာယ်ရှိသည်ကဘာလဲဆိုတော့သင်ကမည်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းကိုလုံးဝကန့်သတ်ထားလို့လဲ"။
ရှင်းနေသည်မှာ Android သည် iOS နှင့် ပတ်သက်၍ များစွာသောအခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်။ ထိုအချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal မှအများဆုံးအသုံးပြုနိုင်ရန် application အမျိုးမျိုးကိုတပ်ဆင်နိုင်ခြင်းသည်တန်ဖိုးတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု Telegram ၏စီအီးအို၏ပြောကြားချက်အရဂူးဂဲလ်၏လည်ပတ်မှုစနစ်အတွက်ချိန်ခွင်လျှာကိုညှိပေးသည်။ ငါတို့မှာစံနမူနာကောင်းရှိတယ် YouTube Vanced အသုံးချနိုင်မှုအရ YouTube ထက်ကျော်လွန်သောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုနှင့်သင်အက်ပလီကေးရှင်းအပြင်ဘက်တွင်သာဒေါင်းလုတ်ဆွဲနိုင်သည်။ တဖန်သင်တို့ထင်ကြသလော
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » NOTICIAS » Telegram ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောကြားသည်မှာသင်သည်လွတ်လပ်မှုနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုလိုချင်လျှင် Apple မှ ထွက်၍ Android ဖြင့်လောင်းပါ
OnePlus Band ကို SpO2 အာရုံခံကိရိယာနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ၂ ပတ်အထိကြေညာသည်